U-Israyeli yizwe elihlinzeka ngokunakekelwa kwezokwelapha olufanele kakhulu. Imithi yama-Israyeli isekelwe ekusetshenzisweni kwezindlela zesimanje zokwelapha nemishini yesimanje. Abasebenzi bekhwalithi eliphezulu basebenza kuzo zonke imitholampilo yezwe. Ukwamukelwa kweziguli odokotela abanokuqeqeshwa okuphansi okusemthethweni akukhipha. Bonke abasebenzi, kubandakanya abahlengikazi, benza inqubo ekhethileyo yokukhetha futhi baphinde baphenye ngezikhathi ezinzima ukuhlolwa, beqinisekisa iziqu zabo. Futhi inzuzo engenakuphikwa yikungabikho komkhawulo wolimi.
Ukwelashwa emitholampilo yase-Israel kunezinzuzo zayo:
1. Imitholampilo eminingi izikhungo eziningi zezikhungo lapho kuzo zonke izifo ezaziwayo ziphathwa ngezinga eliphezulu kakhulu. Iziguli zinikeza izinhlobo ezilandelayo zezinsizakalo:
Ukwelashwa okusebenzayo nokuzimelela,
2. Ezikhungweni eziningi zezokwelapha, ukululekwa okukude kuhlinzekwa, okufakwayo okwenza uhlelo lokwelapha ngabanye. Izifo ezinzima kunazo zonke ezingenathemba zithandwa kakhulu odokotela bakwa-Israyeli futhi zibhekana nazo ngokuphumelelayo.
3. Umdwebo wekhwalithi ephezulu kakhulu yokwelashwa yiqiniso lokulinda isikhathi eside kwezakhamizi kanye nesibonakaliso sokubala njengephesenti ephansi yokufa kwezingane.
4. Muva nje, kaningi emaphepheni wezindaba kubhaliwe amagama ezikhungo zezokwelapha e-Israel, okwenza ukuthi kuphumelele kule nsimu noma emkhakheni wezokwelapha. Iziningi zezikole zezokwelapha zase-Israel zitholakala ezikoleni zamanyuvesi zesayensi, futhi lokhu kunikeza ithuba lokusebenzisa izindlela eziphambili zokwelashwa.
5. Lapho senza ukwelashwa, uhlu olubanzi lwemithi lisetshenziselwa, lapho kutholakala khona amacala okuntuleka kwemithi. Izikhungo zezokwelapha zisebenzisa emisebenzini yazo imishini emisha yephrofayli, i-spectrum yayo evuselelwe njalo.
6. Ngenkathi iselashwa ezikhungweni zezokwelapha, izimo cishe zasekhaya zokuhlala kweziguli zenziwe. I-Chambers inayo yonke imishini: indlu yangasese, ishazi, ikhishi, eminyangweni yezingane kukhona izindawo ezikhethiwe ngokukhethekile zokuthola abazali. Lapha izinhlobo eziyinhloko zokuxhumana zihleliwe, ukuze izihlobo nabangane bakwazi ukuxhumana ngaso sonke isikhathi. Impilo yeziguli ihlelwe ngehora lonke, abasebenzi bazama ukwanelisa zonke izifiso zangasese. Ukubonisana mahhala ekwelapheni kwa-Israyeli kungatholakala kwisayithi "telaviv-clinic.ru".
7. Wonke amalungelo weziguli zase-Israel avikelwe imithetho yezwe. Ikhwalithi yamasevisi anikeziwe ihlangabezana namazinga angaphandle.
8. Isici esihlukile ukuphika umkhuba wokufihla ukuxilongwa kwesiguli. Ulwazi mayelana nezindlela zezempilo nezindlela ezisebenzisayo zokwelapha zihanjiswa ngokugcwele isiguli.
9. Kumelwe kuthiwa ngezindleko eziphansi kakhulu zokwelashwa kuqhathaniswa nemitholampilo efanayo eYurophu naseMelika. Izinsizakalo zezikhungo zezokwelapha zifinyeleleka kumuntu ojwayelekile. Izindleko zixhomeke ezintweni eziningana: izinga lomtholampilo, umshuwalense wezokwelapha, ubunzima besifo, isikhathi senqubo yokutakula.
Ukwelashwa kwa-Israyeli kuhloswe ukuthola imiphumela emihle futhi unikeza wonke amaklayenti amathuba okuba nempilo enempilo.
Indlela yokwenza imbali, ukukhilosha wathungela? uhlelo
Usuku nomlando: Lunini uSuku Lobaba?